Inkampani iphrofayela - Getwell Electronic (Huizhou) Co., Ltd
Okunye Axial Inductor
2 Pin osabalalayo Inductor
3 Pin osabalalayo Inductor
Isigungu lesi siba namalungu
Inductor Imibuzo Ehlobene
Getwell electronics (Huizhou) co., LTD. is a amabhizinisi Sino-angaphandle kuwumsebenzi ohlanganyelwayo, yasungulwa ngo-2004 Sethula kithi njengoba omunye the best professional inductor nomkhiqizi e China, okuyinto ayisipesheli yokukhiqiza inductor ikhithi, SMD inductor, Toroid Ikhoyili, osabalalayo Inductor Lead nomPristi Frequency transformer. Imikhiqizo yethu kabanzi zisebenza ngamandla umthengi, ukukhanyisa, ukuxhumana, Instrumentation, ezempilo, ukuphepha kanye namandla amasha, photovoltaic ukushaja inqwaba, electronics yezimoto kanye nakweminye imikhakha.
Njengamanje, Getwell electronics ine abasebenzi 200, kuhlanganise 20 ocebile isipiliyoni onjiniyela, kanye 12000 metres square imboni endaweni yesimanje. Nge engu-14 professional zokukhiqiza ubuchwepheshe nokuphathwa isipiliyoni. Inkampani yethu ine ephelele ukuphathwa uhlelo, kanye iminyaka engaphezu kweyishumi professional inductance ukukhiqizwa ubuchwepheshe, izisebenzi oluprofeshinali nobuchwepheshe, ephelele imishini ukukhiqizwa nokuhlolwa ithuluzi, ezifana othomathikhi inaliti umshini, othomathikhi pin umshini, okuzenzakalelayo ukubekwa uphawu emshinini, nokunye.
Nge ukusebenza ozinzile futhi amanani abiza, imikhiqizo yethu ukuthengisa kahle emhlabeni wonke, futhi embonini yethu kufanele azimele kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle amalungelo, lingasisiza ukuza nokubambisana okungcono namakhasimende. Manje inkampani yethu iye yaba ngomshini, Automated nohlakaniphe emikhulu yokukhiqiza ibhizinisi.
Getwell electronics bekulungele ukunikeza amakhasimende ne imikhiqizo umhlabeleli nezinkonzo. Thina ngifuna ngobuqotho phambili ukusungula njalo okwesikhathi eside yebhizinisi ukubambisana nawe bese udala nongenza.
Amadivayisi: Yihe-West Industrial Zone, LuoYang Town, BoLuo County, HuiZhou Idolobha, Isifundazwe Guangdong
Ucingo: +86 0752-6318122
amandla inductor, 100 microhenry osabalalayo inductor , osabalalayo phambili inductor , 47uh inductor SMD , SMD ikhoyili inductor, osabalalayo inductor leaded ,